प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन – bampijhyala.com
पौभा सायमी !
Home > समाचार > घटना र अपराध नियन्त्रण > प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन
२७ मंसिर २०७७, शनिबार १६:१९ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । यही मङ्सिर ८ गते पोखरामा फिष्टेल नेपालको प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । कोभिड–१९ का महामारीबीच पनि आन्तरिक पर्यटकले निकै रुचाएको प्याराग्लाइडिङ उडानमा अनुभवी प्यारा पाइलट राजु गैरे (नेपाल) को निधन भएपछि दुर्घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
नागरिक उडड्यन प्राधिकरणअन्तर्गत छानबिन समितिका सदस्यसचिव सुवेदीले उडानको समयमा नियम विपरीतका गतिविधिमा संलग्न केही पाइलट छानबिनमा तानिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणअन्तर्गत दुर्घटनाको छानबिनसँगै नियम विपरीतका गतिविधि भइरहेको सन्दर्भमा पनि छानबिन भइरहेको छ । सुवेदीले छानबिनमा भएका पाइलटले तत्काल उडान गर्न नमिल्ने जनाउँदै कस्तो खालको कार्वाही हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि मात्र थाहा हुने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आगामी पुसको १० गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।
हवाई खेलकूद संस्था ९ना०२०५९ मा स्थापना भएको र २०७५ साल चैतबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नालाई अनुगमन, लाइसेन्स वितरण र नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हो । पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान अनुमति लिएका ३३८ प्यारापाइलट छन् जसमा १२ महिला छन् । पोखरामा ६१ प्याराग्लाइडिङ कम्पनी छन् भने रु एक अर्ब बढीको लगानी रहेको छ । रासस
पौभा सायमी ! २७ मंसिर २०७७, शनिबार १६:१९
२२ हजार ७८ परीक्षणमा ९ हजार २४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ हजार ७६७ निको २७ मंसिर २०७७, शनिबार १६:१९
दोलखामा आज थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण, अहिलेसम्म ५१७ जना संक्रमण, संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या ४१ पुगेको छ । २७ मंसिर २०७७, शनिबार १६:१९
२८ औ मदन भण्डारी स्मृती र त्यो सम्बोधन २७ मंसिर २०७७, शनिबार १६:१९
गीता कपुरको सिउदोमा सिन्दुर ! सिन्दुर कसको नामको हो ? २७ मंसिर २०७७, शनिबार १६:१९